talooyin shukaansi. hindiga engegay?
Xiriir cusub ee had iyo jeer waa kuwa xiiso leh, madadaalo, iyo dareen. Laakiin qaar badan oo waayo-aragnimo engegay ah hindiga iyo kalgacalka sidii markii soconayo. Haddii aad aragto calaamadaha hore ku filan, markaas halkan waa shan waxyaabo aad sameyn karto si caarurta ilaa romantic iyo cusboonaysiiyaan dhimbiil in:
Isku day tagay qoraalada jacaylka yar meelo aan la filayn ee lamaanahaaga si aad u hesho at daqiiqado random isaga ama iyada maalintii oo dhan. Rid fariin ku shandad lammaanahaaga ka hor inta aysan u jiheysan baxay si shaqada, waxay iftiimin doono ilaa ay shaqada oo waxaan ka dhigi weeraryahanka inaan ku aragno shaqada ka dib,. Ku qor warqad jacayl gaaban ee ay boorsooyinka ka hor inta aysan ka tago safar, daynin inay ogaadaan inaad iyaga ayaa seegi doona oo aan la sugi karin ilaa ay soo laaban guriga. Ku qor 'waan ku jeclahay’ ama sawiri qalbi in uumi ku muraayad musqusha markii ugu xiga lamaanahaaga qaadataa Roob. PIN warqad u soo muraayada hore ee aad jeceshahay ee gaariga markii ugu xiga ay leeyihiin in ay maamulaan wadaa.
Aadida mile dheeraadka ah ee ay xeelad xusuusinaya muhiimka kale sababta ay u tahay muhiim ah in aad noqon kartaa caawinaad weyn marka la isku dayayo dib u dhiska hindiga ee xiriirka. Waxaad sii dayn maayo oo kaliya qofka kale ogaan aad ka fekereyso inaad iyaga ku saabsan, laakiin waxaad ku jiri doonta afkaar maalintii oo dhan ay sidoo.
2. Hel More Physical
Xusuusnow Bilowga xiriirka? Fursadda in aad adiga iyo lammaanahaaga ku jiray oo dhan qaarkakale, gacmaha haysta ee munaasabad kasta oo, oo wuxuu ku yidhi dheer, macsalaameeyo dareen dhamaadka taariikhda a, iyo iyo laab ah midba midka kale ee fursad kasta. Noolee Waqtiyadii hore ay sii kalgacal leh lammaanahaaga. Gaarsiinta iyo lammaanahaaga gacmaha is qabsadaan sidii aad ku socon jidka u, ciyaaro footsies miiska hoostiisa at casho, oo la siiyo qofka aad jeceshahay duniga a dhunkasho dheer dhamaadka taariikhaha aad.
Helitaanka badan oo jidhka ah sida xaqiiqada ah ayaa kaa caawin kara noolayno hindiga in la soo sii yaraanayso. Fursadda in, lammaanahaaga qaadan doontaa on calaamadaha iyo jawaabaan markeeda la Jacayl iyo hindiga.
3. Tag safar laba
Waa mid aad u fudud in ay ha nolol maalmeedka ka heli jidka xiriir jacayl. Mararka qaarkood waxaad si daacad ah dareemayaa aadan waqti jacayl aad u leedahay. Hab weyn inuu u cararo waxaa dhan ka oo diirada u dhiska aad xiriirka waa wada qaadashada safar. Qorshee ku cararaan fasax ama Sabtida iyo Axada (ku xiran tahay waqtiga inta aad u leeyihiin in tudhi) in ku lug leedahay waqti badan nasashada ee gaarka loo leeyahay iyo mid ka mid ah is dhexgalka. Waxaa laga yaabaa weekend ah laga fulinyo ama todobaadkii jasiiradda kulaylaha ah ku samayn doono trick ah.
Haddii nolol maalmeedka ka fog lamaanahaaga aad waxaa ku mashquuliyo, baxsadaan ku mashquusho oo ay macno qaadan marti u dhan ka. Waxaa samayn kartaa xidhiidh caalami ah oo ah wanaag iyo is dejiso u labadiinaba aad. Waqti ay diirada saarto kasta oo kale oo aad u isticmaaleyso, kuma koobna oo ku saabsan shaqada, dugsiga, ama arrimaha qoyska.
4. Sii a Gift
Xusuusnow, sababta keliya oo aad Celebrities oo aad nin ama gabadh, macnaheedu ma aha in aad joojin kartaa isaga ama iyada dhiirri. Ragga iyo haweenka qaarkood waxay u baahan yihiin in la had iyo romanced in xiriir si aad u jecel yahay iyo in la doonayo. Samee lammaanahaaga la xasuusto maalmo courtship aad by isaga ama iyada la siiyo hadiyad mahadnaq ah. Hadyadaha ma aha inay noqon baahsan haddii aadan haysan miisaaniyadda waxa u. Shukulaatada A kacay, a trinket yar yar, ama CD ah oo laga sameeyey aad heeso jacayl jecel samayn kartaa trick ah.
Dabcan xidhiidh adag ka baxsan yihiin waxyaabaha qalab iyo hadiyado, laakiin, haddii hindiga waa waxa aad raadinayso dib u dhiska, hadiyad laga yaabaa in waxa aad u baahan tahay si aad u hesho kuwa dareenkooda dovey lovey iyo Wabiyadan mar kale. Ha sugin ilaa guuradii ah ama dhalashadiisa ama. Hadiyad A sabab muuqata aan laguu hayaa waxay saamayn badan ku badan hadiyad la filayo.
5. Bilow Dating Mar
Ha, Ma macnaheedu baxo oo la helo qof cusub. Waxaan ula jeedaa, out on taariikhaha haddana ku soo qaato mid aad jeceshahay. Lammaanayaasha in ay ahayd in uu xiriir muddo aad u dheer, gaar ahaan kuwa wada nool, inta badan iloobaan ku saabsan sida taariikhaha xiiso noqon kartaa. Waxay heli doonaa baydh sameeyo wax caadi ah ay ñ baxeen in ay maqaayad caadiga casho, kiraysato movies, ama dibad ka soo ñ jalaato laakiin ha dhayalsan awoodda ee taariikhda dhab ah marka la isku dayayo inuu dib u dhaliyo hindiga.
Bilowgii of xiriir, Lamaano badan ku riyaaqaa inuu ka baxo iyo samaynta waxyaabo cusub oo wada. Waa xiiso leh iyo xiiso leh si ay u tagaan on taariikhaha meelo aad u ma wada ahaa. Isku day inaad mar kale sameeyo. Ma aha oo kaliya socday doonaa taariikhaha meelo cusub oo ku saabsan hawlaha xiiso wada caawiyo dib u dhiska ee romantic-, waxa kale oo ay kaa caawin doontaa in la abuuro jeer cusub xusuus wada in reminisce ku saabsan ka dib.
Xusuusnow, xiriirka u baahan tahay in la had iyo kobciyo, lana soo qayb galay in ay si hindiga sii noolaadaan oo kobcaya. Kuwani shan talooyin ku caawin kara si aad mar kale ku hiyi kuwa dareen jaceyl, laakiin fiiro joogto ah aad nolosha la wadaagto iyo in laga war hayo xaaladda aad xiriir mar walba loo baahan yahay in ay sii kuwii dareenka diiran gudaha aad adiga iyo lammaanahaaga oo ka gubanaya.
Waxaa sida caadiga ah dhacdaa marka aad yaraan waxaa ka filan, laakiin waxay marna xanuun inay dedaal sameeyaan marka ay timaado ...